कोरोना भाइरस – Sudarshan Khabar
नेपालमा आज शनिबार एकैदिन कोरोना संक्रमितको संख्या सर्वाधिक बढ्यो
काठमाडौं नेपालमा एकैदिनमा आज शनिबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा १,८२३ महिला र ३,१८५ पुरुष गरी ५,००८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो नेपालमा एकैदिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो । थपिएका संक्रमितमा काठमाडौंका मात्रै २,१०० जना रहेका छन् । ललितपुरमा ३६९ […]
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो
काठमाडौं नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख नाघेकाे छ । आज शुक्रबार दुई हजार ५९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितकाे संख्या १ लाख ६ सय ७६ पुगेकाे छ । पछिल्लाे २४ घण्टामा १३ हजार नाै सय ७९ जनाकाे नमुना परीक्षण गरिएकाे हाे । त्यस्तै गएकाे २४ घण्टामा एक हजार ६ सय ८० जना निकाे भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेकाे सङ्ख्या ७३ […]
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्च १३ अर्ब , कसले कति गरे खर्च ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँखर्च भएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत साउन मसान्तसम्म गरी उक्त रकम खर्च भएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । सो खर्चमध्ये संघीय सरकारका तर्फबाट ५ अर्ब ८५ करोड, प्रदेश सरकारको तर्फबाट १ अर्ब ३ करोड […]
कपडाको मास्क कस्तो र कसरी लगाउने ? यस्ताे भन्छ डब्ल्यूएचओ !
काठमाडौैं । कोरोना भाइरसको महामारी चलेसँगै विश्व मास्कमय बनेको छ । धेरै मुलुकमा सरकारले नै मास्क अनिवार्य गरेको छ भने कतिपय मुलुकमा नागरिक नै सचेत भएर मास्क लगाउन थालेका छन् । नेपालमा सरकारले मास्क नलगाइ हिँड्नेलाई संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्था अनुसार १०० रुपैयाँ कारबाही गर्ने गरेको छ । तर मास्क कस्तो लगाउने र कसरी लगाउने […]